सर्वोच्चमा वयान दिँदा प्रधान न्यायाधीश पराजुलीमाथि डाक्टर केसीको ११ आरोप! :: PahiloPost
सर्वोच्चमा वयान दिँदा प्रधान न्यायाधीश पराजुलीमाथि डाक्टर केसीको ११ आरोप!
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले मानहानीको मुद्दामा वरिष्ठ चिकित्सक प्रा डाक्टर गोविन्द केसीसँग आज बयान लिएको छ। अवहेलना मुद्दामा पक्राउ गरी आज बिहान अदालतमा उपस्थित गराउन गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सोमबार आदेश दिइएपछि उनलाई उपस्थित गराइएको हो।
सर्वोच्चमा वयान दिँदा प्रधान न्यायाधीश पराजुलीमाथि डाक्टर केसीको ११ आरोप! को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।